English to Burmese and Burmese to English translator specializing in social sciences, government and politics
Local time: 10:04 MMT (GMT+6.5)
English to Burmese: Burmese Politics and the Pathology of Unity
Myanmar is reachingapoint in its current political transition where people inside and outside of the country have begun to express fears about reforms moving too quickly. These fears are often directed at demands for recognition (if not increased political autonomy) from various marginalized groups; most commonly in Myanmar these are the ethnic minorities that have been seeking political recognition of their disadvantaged position in Burmese society for decades.
The common response from many (mostly Burman) political leaders (and more thanafew foreign observers) is that expressing these types of grievances too loudly during this fragile transition could jeopardize the entire process by damaging national unity atacritical moment. Thus, these grievances should be deferred untilapoint where the country is more politically and economically stable. Whereas General Aung San hoped for “unity in diversity,” I would argue that in Myanmar the discourse has been more akin to “unity through hegemony” and this construction of unity will continue to ignore and alienate non-dominant groups in the country.
Unity has beenaconsistent theme among Burmese political figures, from the colonial period, through military rule, to the present period of transition. Of course, some calls for unity have been for strategic or psychological reasons but in this paper I am interested in the way the Burmese Buddhist conception of unity functions an indicator of correct moral practice or orientation. I argue that this conception of unity is actually an anti-democratic impulse that inhibits the incorporation of diverse voices and perspectives into the Burmese political sphere and is an impediment to national reconciliation. Furthermore, it isn't merelyadisciplining tool of former military governments, it's also been effectively used by members of opposition parties and groups supposedly committed to justice, equality, and democratic development.
Asamoral concept, unity represents devotion toacommon purpose and loyalty toagroup or community; it requires subsuming one’s own interests for the benefit of the whole, something that encapsulates the Buddhist practice of rejecting the self-centered ego. Inalate 19th century treatise of advice foraking, the minister U Hpo Hlaing clearly explained the moral dimension of unity, drawn from the Buddha's advice toagroup of princes. He claimed that, in an effort to achieve unanimity on an important matter, the discussion must leave out individual preferences. Disunity, then, is the result ofagroup of individuals committed only to their own benefit; it isaresult of moral failure.
Later in the text, he warned about the four agatis (biases). The failure ofapolitical body to act inaunified way would indicate that some or all of its members are under the influence of these biases and, asaresult, acting according to their own narrow interests. A unified assembly, on the other hand, has overcome divisions precisely because its members had developed their moral practice to overcome the agatis and act according to the ideal of selflessness. Unity then depends on individual moral development and the ability to move beyond self-interest in making political decisions.
Contemporary uses of the idea of unity also stress its nature asamoral concept. In an article in an underground journal circulated in Myanmar in the months prior to the 2007 “Saffron Revolution,”amonk connected unity to correct moral practice and control of one’s actions. “Inaunited people we can see that the conduct of their body and mind is honest, their moral conduct is good, and the strength of their mental qualities is great.” He went on to state that, “unity needs control/restraint through proper moral conduct and an even mind.” Note the implication that ifacountry is not unified it is because its people are morally deficient, unable to control their self-centered impulses.
The military conception of disciplined democracy arises from the fear of political disorder, which intensified during the parliamentary period and provided members of the military with their view of themselves as the only institution capable of holding the country together. The potential divisiveness of democracy must be mediated byagroup capable of transcending potential disunity (the military) that can also impose discipline on the citizenry.
The military’s narrative of how to developalasting democracy is also consistent with the general Burmese perspective on popular political participation that is skeptical of the ability of the average person (pu htu zin) to participate in politics and wary of the results when it occurs. That is, most citizens do not yet have the moral grounding to move beyond their own selfish interests and participate inapotentially divisive democratic process inaunified way that would benefit the country asawhole.
A 2008 editorial from the gov't run New Light of Myanmar warned readers of the dangers of not practicing democracy “correctly.” The failures of the parliamentary period were “not because of democracy, but because of those who implemented democracy, and those who were desperate to come to power with egotism, attachment to the party concerned, and selfishness.” Another editorial reinforced the idea that only the military was morally capable of rising above this egotism and working for the benefit of the country. The importance of “disciplined” participation implies that most citizens were not and are still not morally equipped to take part in the correct manner without continued guidance. The strongest indicator of this moral immaturity from the military’s perspective was continued political opposition to the state.
Ina2005 speech, former Senior General Than Shwe stated that “Underademocratic system, only high education standards can ensure discipline andaclear perception of right from wrong.” He also warned of the dangers ofareturn to the disorder and chaos that characterized the parliamentary period and then drew on the four agatis (biases) that U Hpo Hlaing used to argue for collective decision-making and that Aung San Suu Kyi also used to criticize military rule. “Genuine democracy can flourish only when each and every citizen possesses reasoning power and is able to vote for delegates without [the] four forms of partiality.” The military instituted “disciplined democracy” asaform of moral and political guardianship and military leaders' claims regarding the legitimacy of their guardian role refer to the purity of their intentions (non-disintegration of the Union, as opposed to personal gain) and position themselves as the only group capable of making selfless decisions with the interest of the entire nation in mind.
This skepticism is also not just limited to past political figures or the military. In an interview just after his release, the 88 Generation activist Min Ko Naing stated “It is very important to have discipline and unity. We have to show that we deserve democracy.” This conception of unity reinforces an anti-democratic discourse that questions the ability of individual citizens to (ever) have the moral capacity (ability to think beyond their own interests) to effectively participate in self-governance.
There has also beenapersistent concern for the collective political action of the party system. The proliferation of political parties and events like the 1958 split in the ruling AFPFL was seen as evidence of disunity and of the moral deterioration of the government and the citizens. Seeing political parties as evidence of factionalism continued throughout the period of military rule, especially after the ill-fated 1990 elections. A 1998 article in the New Light of Myanmar stated, “As to freedom of organizational activity and expression, it can beabig danger, as long as there are political parties that still cannot renounce the way of confrontation, defiance of authority and anarchy, so there will be only such freedom within the bounds of rules and regulations.” Here, “the way of confrontation” implies that any disagreement is unacceptable and is justafirst step toward fragmentation and the dissolution of the country. Whereas the phrase “defiance of authority” implies that the authorities know what's best; they are the (only) ones (capable of) working for the benefit of all, while any opposition could only be selfish and misguided.
Finally,adiscussion of unity asamoral concept cannot ignore the ways in which groups across the political spectrum have used the rhetoric of unity to quash dissent within their own organizations. In this way, the unity discourse has functioned asadisciplining tool, deployed in order to win an internal argument or moveagroup pastacontentious disagreement. Multiple scholars have noted instances where “moralized” concepts like unity have been used to repress dissenting or minority views, by implicitly or explicitly questioning the moral conduct of those who disagreed with their policies.
While I would argue that the Burman-dominated discourse on national unity presents the greatest impediment to national reconciliation,aconcern with unity has stifled difference and generated conflict within non-Burman and other minority groups in the country as well. For example, even though Christians are not the majority among Karens, Christians have dominated the leadership of the KNU and Karen ethnic oppositional identity is broadly conceived as Christian. This has resulted in discrimination against Buddhists and lack of recognition of Buddhist Karen within the movement. The split between the DKBA and the KNU is an example of the destructive effects that an over-riding and homogenizing concern for unity can have onadiverse political community.
This brief examination of unity asamoral notion also demonstrates the ways in which political concepts acquire additional dimensions of significance when interpreted withinaBurmese Buddhist worldview. In this narrative, unity is an indicator of correct moral practice, of the ability of individuals inagroup to overcome the natural human inclination towards self-interest; it functions as an evaluative moral concept. Those who threaten unity do so because they are enslaved to selfish and individualistic desires and unable to see or work for the benefit of the community. Those who control the discourse on unity position themselves as morally superior; they see themselves as capable of overcoming their desires, even sacrificing individual interests, to realizeagoal that will benefit all.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အသွင်းကူးပြောင်းမှုတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် အလွန်လျင်မြန်လွန်ခြင်း ကြောင့် ပြည်တွင်းကော ပြည်ပတွင်နေထိုင်ကြသည့် ပြည်သူများက ကြောက်ရွံ့စိုးထိတ်မှုများ စတင်ထုတ် ဖော်ပြသခဲ့သည့် ပွိုင့်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနေသည်။ ယင်းကြောက်ရွှံ့မှုများကြောင့် အမျိုးမျိုးသော ဖယ်ကြဉ် ခံ အုပ်စုများက (အကယ်၍ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုတိုးတက်မရရှိခဲ့လျှင်) အသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက် တောင်း ဆိုမှုများပေါ်ပေါက်လာလေ့ရှိသည်။ ယေဘုယျအကျဆုံးဆိုရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆိုပါ တိုင်းရင်း သားလူနည်းစုများသည် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းမျာစွာ ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် မိမိတို့၏ အကျိုးယုတ်ခဲ့ရသော အနေအထား၏ နိုင်ငံရေးအသိအမှတ်ပြုမှုကို ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ များစွာသော (အများအားဖြင့်ဗမာ) နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ (နှင့်နိုင်ငံခြားလေ့လာစောင့်ကြည့်သူများ) ထံမှလာသည့် ယေဘုယျတုံ့ပြန်မှုမှာ ထိလွယ်ရှလွယ်အသွင်ကူပြောင်းရေးကာလအတွင်း ယင်းသို့သော ပုံစံမျိုးနစ်နာ ချက်များကို ကျယ်ကျယ် လောင်လောင်ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည့်ကာလတစ်ခုတွင် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ် ရေးကိုပျက်ပြားစေခြင်းဖြင့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်သည်ဟု ဆို ကြသည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်သည် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးအရ တည်ငြိမ်မှုပိုမိုရရှိလာသည့် အချိန်တစ်ခု ရောက်သည်ထိယင်း နစ်နာချက်များကို ရွှေ့ဆိုင်းထားသင့်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမျှော်လင့်ခဲ့သည့် “မျိုးစုံကွဲပြားမှုရှိလျက်နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု”ဆိုသည်ကိုကျွန်တော့်အနေဖြင့်မှု မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပုံစံမှာ “ဗိုလ်ကျစိုးမိုး ခြင်းဖြင့် စည်းလုံး ညီညွတ်ခြင်း” နှင့်ပိုတူနေပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိုသို့တည်ဆောက်ခြင်းသည်တိုင်း ပြည်တွင်းရှိလူနည်း စုအုပ်စုများကို ဆက်လက်လျစ်လျူရှုပြီး စစ်မှန်သောစည်းလုံးညီညွတ်မှုမှကင်းကွာစေမည်ဟုသုံးသပ်လို ပါသည်။
စည်းလုံးညီညွတ်မှုဆိုသည်မှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကြား ကိုလိုနီခေတ်၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလ တို့မှသည်ယနေ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအထိ စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိခဲ့သော သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အချို့သောစည်းလုံးညီညွတ်မှုတောင်းဆိုခြင်းများမှာမဟာဗျူဟာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရား များအတွက်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်းယခုစာတမ်းတွင်မူ ကျွန်တော်သည်မှန်ကန်သော ကျင့်ဝတ်သီလအလေ့အကျင့် သို့ မဟုတ်စိတ်သန်သည့်အရာ၏ ညွှန်းကိန်းတစ်ခုကို စည်းလုံးညီညွတ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ဗမာဗုဒ္ဓ ဘာသာ အယူအဆပုံနည်းလမ်းကိုသာတင်ပြလိုပါသည်။
အဆိုပါစည်းလုံးညီညွတ်မှုအယူအဆသည် တကယ်တမ်း အားဖြင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အ၀န်းအ၀ိုင်းအတွင်းသို့ မျိုးစုံသော အသံများနှင့် ရှုထောင့်များ၏ ပေါင်းစည်းပါဝင်စေရန် ဆောက်ရွက်ရာတွင် ဒီမိုကရေစီ မဆန်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ခလုပ်ကန်သင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ယင်းနည်းလမ်းသည်ယခင်စစ်အစိုးရကသာလျင်ကိုင်စွဲကျင့်သုံးခဲ့သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ် ဘဲအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီဝင်များ နှင့်တရားမျှတမှု၊ တန်းတူ ညီမျှမှု၊ နှင့် ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအားထုတ် ဆောင်ရွက်ရန်ကတိက၀တ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသောအဖွဲ့များပင်လျင် ထိထိရောက်ရောက်ကျင့်သုံး ခဲ့သည့် နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကျင့်သီလသဘောတရားတစ်ခုအဖြစ် စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုံရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် မြုပ်နှံခြင်းနှင့် အုပ်စုတစ်ခု သို့မဟုတ် အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုကို သစ္စာခံခြင်းဖြစ်ကာ အားလုံး၏အကျိုးအတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားစွန့် ရန်လိုအပ်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုဗဟိုပြုသည်အတ္တကို ငြင်းပယ်သည့် ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ထဲမှ ထုတ်နုတ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် ယောအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလှိုင်က မင်းညီ မင်းသားတို့အားဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သည့်တရားတော်ထဲမှထုတ်နုတ်ပြီးစည်းလုံးညီညွတ်မှု၏ ကိုယ်ကျင့်သီလ ဆိုင်ရာကို ရှင်းလင်းစွာ ရှင်းပြခဲ့သည်။ အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်တစ်ခုတွင် ညီညီညွတ်ညွတ်အောင်မြင်ရန် အားထုတ်ရာတွင် တစ်ဦးချင်းအကြိုက်ဘေးဖယ်ထားရမည်ဟု သူကဆိုသည်။ ထို့ပြင် မညီညွတ်မှုဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုတစ်ဦးချင်း၏ အုပ်စုတစ်စုသည် မိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုသာဆောင်ရွက်ကြသည့် ရလဒ်ဖြစ်ပြီး ယင်းသည် ကိုယ်ကျင့်သီလ ပျက်ယွင်းခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။
ကျမ်း၏နောက်ပိုင်းတွင် အဂတိတရားလေးပါးအကြောင်းကို သူက သတိပေးခဲ့သည်။ စည်းလုံးညီညွတ်သော နည်း လမ်းတစ်ခုဖြင့်လုပ်ဆောင်ရာတွင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ကျရှုံးမှုမှာ အချို့သူများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင် အားလုံးသည် အဂတိတရားများ၏ လွှမ်းမိုးမှုခံနေရပြီး ရလဒ်အားဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကျဉ်းမြောင်း သော အကျိုးစီး ပွားများအရသာ ဆောင်ရွက်ကြတော့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် စည်းလုံးညီညွတ်သော ညီလာခံသည် ယင်းတို့ ၏အဖွဲ့ဝင်များသည် အဂတိတရားကိုကျော်လွှားရန်နှင့် အတ္တကင်းမှု၏ စံနမူနာအ တိုင်းဆောင်ရွက်ရန်သူတို့၏ ကိုယ်ကျင့်သီလများကို တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ကွဲပြားမှုများကို တိတိပပကျော်လွှားသွားနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုဆိုသည်မှာ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်ကျင့်သီလဖွံ့ဖြိုးကာ နိုင်ငံရေးဆုံး ဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် ကိုယ်ကိုယ်စီးပွားထက်ကျော်လွန်ပြီးလုပ် ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်မူတည်နေသည်။
ခေတ်ပြိုင်သုံးစွဲနေသည့်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအိုင်ဒီယာများလည်းယင်းသဘာဝကိုပင် ကိုယ်ကျင့်သီလ သဘော တရားပင်ဖြစ်သည်။ “၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး” မတိုင်မီလများက မြန်မာနိုင်ငံတွင်ထုတ် ဝေခဲ့သည့် မြေအောက်ဂျာနယ်တစ်ခုတွင်ပါရှိသည် ဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် စည်းလုံးညီညွတ်မှုဆိုသည်မှာ မှန်ကန်သောကိုယ်ကျင့်သီလနှင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သံဃာတော် တစ်ပါးကဆိုသည်။ “ညီညွတ်သူတို့မှာ ကိုယ်၊ စိတ်အမူအရာတို့ ရိုးဖြောင့်မှုရှိခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့်သီလတရား ကောင်းခြင်း၊ ပညာဥာဏ်ဂုဏ်ကြီးမားခြင်းတို့ ပြည့်စုံနေသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်”။ “ညီညွတ်ခြင်းသည် မျှတသောအသိဥာဏ်၊ကိုယ်ကျင့် တရားတို့ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့လိုအပ်မည်” ဟုသူက ဆက်လက်ရေးသား ထားသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ မညီညွတ်ခြင်း မှာ ပြည်သူများ ကိုယ်ကျင့်သီလအားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့၏ မိမိကိုယ်ကို ဗဟိုပြုသည်စေ့စော်မှုများကို ထိန်းချုပ်ရန်မတတ်နိုင်သောကြောင့်ဟု မှတ်သားရတော့ မည့်ပုံရှိနေသည်။
စစ်တပ်၏ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီသဘောတရားမှာ ပါလီမန်ခေတ်အတွင်း ပြင်းထန်ခဲ့သော နိုင်ငံရေး မငြိမ်သက်မှုကို ကြောက်ရွံ့မှုမှ ပေါ်ထွက်လာပြီး စစ်တပ်ကသာ တိုင်းပြည်ကိုတစ်စည်းတစ်လုံးဖြစ် အောင်ကိုင် တွယ်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော အင်စတီကျူးရှင်းအဖြစ်ယင်းတို့ဘာသာ ရှုမြင်စေခဲ့သည်။ ဒီမိုရေစီ၏ကွဲပြားနိုင်သော အလားအလားများသည်အလားအလာရှိသောစည်းလုံးညီညွတ်မှုပြုကွဲမှု (စစ်တပ်) ကို ပြုလုပ်နိုင်သည့် အုပ်စုတစ်ခုကသာပြုလုပ်နိုင်ပြီး နိုင်ငံသားတို့အပေါ်တွင်လည်း စည်းကမ်းများပြဌာန်းလာ စေခဲ့သည်။
ဒီမိုကရေစီတည်မြဲရေးကို မည်သို့မည်ပုံအကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဆိုသည့် စစ်တပ်၏အမြင်မှာ နိုင်ငံရေး တွင် သာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်များ (ပုတုဇဉ်) များ၏ အစွမ်းအစမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းပြီး ထိုသို့ဖြစ်လာလျှင် ရလဒ်ကို သတိထားရမည်ဟူသော ပေါ်ပြူလာနိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ခြင်းအပေါ် ယေဘုယျဗမာအမြင်နှင့်လည်း ကိုက်ညီနေ သည်။ ထို့ကြောင်ပင် နိုင်ငံသားအများစုသည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားများထက်ကျော်လွန်ပြီး ရှေ့ဆက်လှမ်းရန် ကိုယ်ကျင့်သီလဆိုင်ရာအခြေခံတစ်ခုကိုရောက်ရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံး အနေဖြင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် ညီညွတ်သောနည်းလမ်းတစ်ခုတွင် အလားအားဖြင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည့် ဒီမိုကရက်တစ်ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်တွင် လည်းပါဝင်ခြင်းမရှိကြပေ။
အစိုးရသတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်သော မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်၂၀၀၈ ခုနှစ်၌ပါရှိသည့် အယ်ဒီတာ့ အာဘော် တစ်ခုတွင် ဒီမိုကရေစီကိုမှန်ကန်စွာမကျင့်သုံးခြင်း၏အန္တရာယ်များကို စာဖတ်သူများအားသတိပေး ထားသည်။ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေတ်မအောင်မြင်ခြင်းမှာ ဒီမိုကရေစီကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ဒီမိုကရေစီကို ဖော်ဆောင်သူ ကြောင့်သာဖြစ်ပြီး အာဏာကို အတ္တ၀ါဒဖြင့်ကျင့်သုံးသူများကြောင်းဖြစ်ကာ ပါတီစွဲ၊ အတ္တစွဲများကြောင့်ဖြစ် သည်ဟု ရေးသားထား သည်။ နောက်ထပ်အယ်ဒီတာ့အာဘော်တစ်ခုတွင်လည်း စစ်တပ်သည်သာယင်းအတ္တစွဲကိုကျော်လွှားနိုင်စွမ်းရှိပြီးတိုင်းပြည်အကျိုးသယ်ပိုးနိုင်သည့်ဆိုသောအိုင်ဒီယာ ကို ရေးသားခဲ့သည်။ စည်းကမ်းရှိစွာပါဝင်ရေး၏ အရေးကြီး ပုံကိုပုံဖော်ထားသည်မှာလည်း နိုင်ငံသားအများစု သည် ဆက်လက်လမ်းညွှန်မှုမရှိဘဲ မှန်ကန်စွာပါဝင်နိုင်ရန် ကိုယ်ကျင့်တရား မရှိသေးခြင်းတို့ဖြစ်နေကြသည် ဟုဆိုပြန်သည်။စစ်တပ်အမြင်အရယင်းသို့ ကိုယ်ကျင့်တရားမဖြူစင်ခြင်းအားအကောင်းဆုံးချိန်တွင် နိုင်ငံ တော်အားဆန့်ကျင့်သည့် နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများဖြစ်လာခဲ့ကြ သည်ဟု ဆိုသည်။
“ဒီမိုကရေစီစနစ်အောက်မှာပညာရည်မြင့်မားသူတွေသာစည်းကမ်းတကျနေနိုင်ပြီးအမှန်အမှားကို ခွဲခြား သိမြင်နိုင်တယ်”ဟုအငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက၂၀၀၅တွင်ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်းတစ်ခု၌ ထည့်သွင်း ပြော ကြားခဲ့သည်။ ပါလီမန်ခေတ်ကဲ့သို့ တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်မည့်အခြေအနေကို ပြန်ရောက်သွားမည့် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သူကသတိပေးခဲ့ပြီး စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်ပြောလေ့ ရှိသည့် အဂတိ တရားလေးပါးအကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအဂတိတရားလေး ပါးဆိုသည်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစစ်တပ်အားဝေဖန်ရာတွင်သုံးလေ့ရှိသည်။ “စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ နိုင်ငံသားတိုင်းကဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အဂတိတရားလေးပါးကင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကို ရွေးနိုင်တဲ့အ ချိန်မှာထွန်းကားနိုင်တယ်”။စစ်တပ်ကဖော်ဆောင်သည့်စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ ကိုယ် ကျင့်သီလနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ထိန်းကျောင်းပေးမည့် ပုံစံတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့သည်သာ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံးအကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ကျဉ်း ပေးနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းအဖြစ့် ပုံဖော်ထားပြီး (ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ ကိုယ်ကျိုးစီး ပွားမငဲ့ရေး) မိမိတို့၏ စင်ကြယ်ကြောင်းညွှန်းဆိုကာ သူတို့၏ တရားဝင်ဖြစ်မှုအဖြစ် စစ်ခေါင်းဆောင်များကပြသနေခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါသံသယ၀ါဒသည် အတိတ်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်းများနှင့် စစ်တပ်အပေါ်တွင်သာ အကန့်အသတ် ဖြင့်ရှိနေသည်လည်းမဟုတ်ပေ။ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မင်းကိုနိုင်သည် သူအကျဉ်းထောင်မှ လွတ်လာပြီးစတွင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုဖြေကြားရာတွင် “စည်းကမ်းရှိဖို့နဲ့ ညီညွတ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ထိုက်တန်ကြောင်း ပြသရပါမယ်” ဟုဖြေကြားခဲ့သည်။ ညီညွတ်မှုပေါ် ယင်းသဘော ထားသည် မိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်မှုတွင် ထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ပြီးကိုယ်ကျင့်သီလစွမ်းအား (မိမိတို့အကျိုးစီးပွားကိုကျော်လွန်ပြီး စဉ်းစားနိုင်စွမ်း) ရှိရန်(အမြဲ) နိုင်ငံသားတိုင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မေးခွန်းထုတ်သည့် ဒီမိုကရေစီမဆန်သောသဘောတရားကို အားကောင်းစေသည်။
ပါတီစနစ်၏ စုပေါင်းနိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှုအတွက် အမြဲရှိနေခဲ့သော ပူပန်မှုတစ်ရပ်လည်း ရှိနေခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး ပါတီများများပြားနေခြင်းနှင့် ၁၉၅၈ တုန်းကကဲ့သို့ အာဏာရ ဖဆပလ နှစ်ခြမ်းကွဲမှုဖြစ်ရပ်များကို မညီညွတ်မှု၏ သက်သေတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ပြီး အစိုးရနှင့်နိုင်ငံသားများ၏ ကိုယ်ကျင့်သီလပျက်ယွင်းခြင်း အဖြစ်လည်း ရှုမြင်သည်။ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်သည့် ကာလတစ်လျောက်လုံးနိုင်ငံရေးပါတီများကို အုပ်စုဖွဲ့ဝါဒ၏ သက်သေအဖြစ်ဆက်လက် ရှုမြင်ခဲ့ကြပြီး အထူးသဖြင့် အာဏာလွဲမပေးခဲ့သည့် ၁၉၉၀ ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၈ တွင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ဆောင်းပါးတစ်ခု၌ ရေးသားခဲ့သည်မှာ “အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများလွတ်လပ် ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အရဆိုလျှင် နိုင်ငံရေး ပါတီများက ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်း၊ အာဏာဖီ ဆန်ခြင်း နှင့် မင်းမဲ့စရိုက်ကို မစွန့်လွှတ်သမျှကာလပတ်လုံး အန္တရာယ်ကြီးကြီးမားမားတွေ့နိုင်သည်။ ယင်းသို့ သော လွတ်လပ်မှုမျိုးသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဘောင်ထဲ တွင်သာ ရှိရပေလိမ့်မည်”။ ယခုနေရာတွင် “ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရေး လမ်းကြောင်း” ဆိုသည်မှာသဘောမညီ မှုတစ်ခုခုကိုမျှလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်ပြိုကွဲပြီးအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်မည့်ပထမဆုံးခြေလှမ်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ “အာဏာပိုင်များကို ဖီဆန်ခြင်း” ဆိုသည်မှာလည်း အာဏာပိုင်များသည် မည်သည်အရာကောင်းသည်ကို သိပြီး အားလုံးအကျိုးအတွက်လုပ်နိုင် စွမ်းရှိသူများသာဖြစ်သဖြင့်အတိုက်အ ခံမှန်သမျှသည် အတ္တကြီးကာလမ်းလွဲနေသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအားဖြင့် ညီညွတ်ခြင်းကို ကိုယ်ကျင့်တရားသဘောတရားအဖြစ်ဆွေးနွေးခြင်းတစ်ရပ်သည် မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုချေမှုန်းရန်ညီညွတ်ခြင်းဆိုသောစကားကို နိုင်ငံရေး အသွေး အရောင်စုံကြားသုံးစွဲခဲ့သည်သည့်နည်းလမ်းကို လစ်လျူရှုရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ ထိုနည်းလမ်းဖြင့် ညီညွတ်မှုသဘောတရားသည် စည်းကမ်းထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ရပ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပြီး အဖွဲ့အစည်း တွင်းအငြင်းအခုံကို အနိုင်ရရန် သို့မဟုတ် အစဉ်အဆက်သဘောထားမတူညီမှုတစ်ခုကိုအတိတ် တွင်ထားပြီး ရှေ့ဆက်ရန်သုံးကြသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဇာတ်သွင်းထားသော ညီညွတ်မှုကဲ့သို့သဘောတရားသည် သဘောထားကွဲလွဲခြင်း သို့မဟုတ် လူနည်းစုအမြင်များကို ဖိနှိပ်ရာတွင်သုံးကြသည်ဟု ပညာရှင်များစွာက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ မိမိတို့၏ မူဝါဒများကို သဘောမတူသူများအား ကိုယ်ကျင့်တရားလိုက်နာကျင့်သုံးမှုကို ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးသို့မဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးခွန်ထုတ်ခြင်းဖြင့်သုံးကြခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသားညီညွတ် ရေးအပေါ် ဗမာကြီးစိုးသော သဘောတရားကြောင့် အမျိုးသားပြန်လည်သွေးစည်းညီ ညွတ်ရေး အတွက် အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ကဆိုချိန်တွင် တိုင်းပြည်တွင်း၌ ဗမာမဟုတ်သူ များနှင့် အခြားသော လူနည်းစုအုပ်စုများကြားတွင်လည်း ညီညွတ်မှုနှင့်ပက်သက်ပြီး ကွဲပြား မှုများပြည့်နှက်နေပြီးပဋိပက္ခများလည်းပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။ ဥပမာ ခရစ်ယာန်များသည် ကရင်တိုင်းရင်းသား များကြားတွင်လူများစုမဟုတ်သည့်တိုင် ရစ်ယာန်များသည် KNU ၏ ခေါင်းဆောင်မှုနေရာများတွင် စိုးမိုးထား ပြီး ကရင်တိုင်းရင်းသား အတိုက်အခံဝိသေသကို ခရစ်ယာန်အဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မှတ်ယူကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာများကို ခွဲ ခြားသည်ရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်များကို အသိအမှတ်ပြုမှုမရှိခဲ့ပေ။DKBA နှင့်KNU တို့ကြား အကွဲအပြဲသည် မျိုးစုံကွဲပြားသော နိုင်ငံရေးအသိုက်အ၀န်း တစ်ခုတွင် ညီညွတ်မှုရရှိနိုင်ရေးနှင့်ပက်သက်ပြီး ရောထပ်ပစ်ခြင်းနှင့် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးခြင်းတို့၏ အဖျက်သဘော သက်ရောက်မှုများ၏ ဥပမာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ညီညွတ်မှုကိုကိုယ်ကျင့်သီလသဘောတစ်ခုအဖြစ်အကျဉ်းရုံးဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်လည်း ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာလော ကီအမြင်အတွင်း အနက်ကောက်ချိန်တွင် နိုင်ငံရေးသဘောတရားအရ နောက်ထပ်ထင်ရှားသောမျက်နှာစာ များထုတ် ယူသည့်နည်းလမ်းများဖြင်လည်း ရှိကြသည်။ ညီညွတ်မှုသည် မှန်ကန်သောကိုယ်ကျင့်တရားကျင့် သုံးခြင်း၏ ညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုသောယင်းသဘောတရားအရအုပ်စုတစ်ခုတွင်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏စွမ်း ဆောင်နိုင်ရည်သည်ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားဆီသို့တိမ်းညွတ်တက်သည့် လူ့သဘာဝကို ကျော်လွှားနိုင်မည်ဖြစ် သည်။ ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကိုယ်ကျင့်သီလသဘောတရားအကဲဖြတ်ချက်တစ်ခုအ ဖြစ်ရှုမြင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ညီညွတ်မှုကိုခြိမ်းခြောက်သူသည်အတ္တနွံထဲနစ်နေပြီး တစ်ကိုယ်ရည်ဆန္ဒ၏တွင်းနက်ထဲကျနေကာ အသိုက်အ၀န်း၏ အကျိုးအမြတ်အတွက် ရှုမြင်ရန် သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်ရန် မတတ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ညီညွတ်မှု သဘောတရားကို ထိန်းချုပ်ထားသူတို့သည် မိမိတို့ကိုယ်ကို ကိုယ်ကျင့်သီလအားဖြင့် မြင့်မြတ်သူအဖြစ်ထား ကြပြီး မိမိတို့သည် မိမိတို့၏ဆန္ဒများကို ကျော်လွှား နိုင်သူများအဖြစ်ရှုမြင်ကာ အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမည့် ပန်းတိုင်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိရန် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏အကျိုးစီးပွားများကိုပင် စတေးသည်။
Burmese to English: မဟာ (Splendor)
မြန်မာဟေ့လို့ ဟစ်ကြွေးဆဲ သက်သေများ...
ရာစုနှစ် အဆက်ဆက်ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ အားလုံးရဲ့အမွေ...
သမိုင်းဝင် ကဗျည်းထက်... တို့နှလုံးအိမ်သွေးစက်...
ကြီးမြတ်လေသော သမိုင်းကြောင်းများ ဒီမြေကြီးမှာ...
မင်းတရား အနော်ရထာကျေးဇူးများ ဒီမြေကြီးထက်မှာ...
ဒီမြေဟာ တို့တတွေရဲ့နှလုံးသား ဝိညာဉ်ပဲ...
ရဟန်းမြတ် အရဟံထွန်းညှိခဲ့ သာသနာ့အလင်းရောင်...
မြန်မာတွေ အားလုံးရဲ့... ပုဂံ
Oh ye antique bricks of the ramparts
Thou art the evident of the grandeur of us
Heritage ours from centuries past
Intricate relief and frescoes with thine unfading beauties
Finest specimens of Myanmar artisans
Engraved in history as our lifeblood
Let them stand as ever unto this last
Oh ye Splendor
Great moments in history art on this land
The grace of great king Anawrahta art on this land
This land is our soul, our heart
Bagan for us
Our heroes’ sword and spear left behind the marks here
Nationalistic fervor of Myanmar
Bequeath us the memories for everlasting
Oh until at last never diminishing
The light of Buddha’s Sasana shining bright
Venerable Arahan hath wrought the light
Innovative visionary young social scientist and activist with drive and initiative, currently doing PhD in Asian Studies at the Universiti Brunei Darussalam. Extensive firsthand experience in politics and societies in Burma and other Southeast Asian countries. Technically proficient with Microsoft Windows, Office applications, Endnote, Adobe Acrobat, Photoshop, computer security, and maintenance.
English to Burmese 1
Keywords: Burmese, Myanmar, Social Science, History, Art, Film, Anthropology, Southeast Asian Studies, Areal Studies